आजदेखि काठमाडौंका सडकमा विद्युतीय बस चल्दै , बसमा छन् यति धेरै सुबिधा ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २३ भाद्र सोमबार १२:२७
आजदेखि काठमाडौंका सडकमा विद्युतीय बस चल्दै , बसमा छन् यति धेरै सुबिधा !
एजेन्सी, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार (आज) देखि विद्युतीय बस सेवा सुरु हुने भएको छ । एक दशक अघि सरकारी स्वामित्वमा ट्रली बस सेवा सञ्चालन हुने गरेकोमा हाल बन्द छ । अब भने निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक विद्युतीय चार्ज मार्फत सार्वजनिक बस सेवा सुरु हुन लागेको हो ।सुन्दर यातायात प्रालिले पहिलो चरणमा दुईवटा विद्युतीय बसबाट रिङरोडमा सेवा दिने भएको हो । कम्पनीले तत्काल नै सात वटा बसमार्फत सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ । प्रालिले चीनबाट १८ वटा लामा आकारका विद्युतीय बस भित्र्याउने योजना बनाएको छ ।
कम्पनीले वर्षभरिमा २५ वटा बस काठमाडौंमा सञ्चालन गर्नका लागि ल्याइने योजना रहेको जनाएको छ ।सुन्दरले ल्याउने बस ४० सिट क्षमता सम्मका छन् । कम्पनीले फरक–फरक रुटमा चलाउन सकिने गरी तीन किसिमका बस ल्याउनेछ । कम्पनीका अनुसार बसमा नै आधुनिक तवरको स्मार्ट पेमेन्ट सिस्टम जोडिएको छ । त्यसबाट यात्रुले कार्ड राखेर आफ्नो तोकिएको भाडा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । गाडीमा सीसी क्यामेरा, जीपीएस, ह्यांगर लगायतको सुविधा रहनेछ ।नेपालमा चल्ने बस यहाँको सडकमैत्री बनाइएको छ ।नेपालका लागि ल्याइएको बसमा छुट्टै प्राविधिक डिजाइन गरिएको हो ।
खाल्डाखुल्डीमा अगाडि नठोक्कियोस् भनेर नेपाल आउने बसलाई छुट्टै तवरले डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।कम्पनीले विद्युतीय बसलाई ४० मिनेटमा चार्ज गर्न सकिने बताएको छ । काठमाडौंमा लामो समय बस एकै स्थानमा ‘होल्ड’ गरेर चार्ज गर्न नसकिने अवस्था भएकाले कम्पनीले सुपर फास्ट चार्जिङ मेसिन पनि ल्याउन लागेको जनाएको छ ।विद्युतीय बस वातावरणमैत्री हुन्छन् । बसले कुनै प्रकारको इन्धन खपत गर्दैनन् भने डिजेल गाडीले जस्तो चर्को ध्वनि पनि ननिकाल्ने भएकाले विश्वभरि नै पछिल्लो पटक विद्युतीय बसको प्रयोग बढेर गएको छ ।
PREVIOUS Previous post: झापाका २ स्थानमा एउटै समयमा शक्तिशाली बम विष्फोट
NEXT Next post: सशस्त्र प्रहरीले सीमामा यसरी घुस खाएर गराउँछन् तस्करी